N'ogbe RGB Gamer Desk na ime njikwa ihe nlereanya ZA Manufacturer and Supplier |Ụba abụọ
Akụkụ ngwaahịa:120 x60x 75cm;kilogram 22
Ihe:Mpempe akwụkwọ, igwe, plastik
Ibu ihe:22 n'arọ
• Nnukwu egwu elu: n'ozuzu akụkụ bụ 120*60*75cm(47.5*23.8*29.6 inch).Na a carbon eriri laminated n'elu, na desktọpụ bụ waterproof, ọkọ-eguzogide, okpomọkụ na-eguzogide na nwere ezi udidi.Desktọpụ ahụ dị ogologo na mbara zuru oke maka nlekota 2 na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ, ọrụ ma ọ bụ ihe mmụta.
• Igwe ọkụ RGB dị egwu: tebụl egwuregwu na-enye imewe ergonomic na oke mmesapụ aka na mmetụta ọkụ RGB na-adọrọ adọrọ iji meziwanye ahụmịhe egwuregwu gị dị oke egwu.Na njikwa igodo 17 maka ọtụtụ ụdị ọkụ: 6 otu agba, 6 otu agba na-agbanwe, mgbanwe ọkụ RGB na ọkụ ọkụ.
• Ihe owuwu Z-frame kwụsiri ike na nke na-eguzogide: a na-eji oche egwuregwu ahụ dị elu, na-adịgide adịgide na ụkwụ ígwè na-adịgide adịgide ma nwee ike ịkwado ibu dị elu ruo 30 n'arọ.Desktọpụ ahụ siri ike (18mm) na etiti igwe nwere ụdị Z na-ahụ maka ịdịte aka na ike.Ụkwụ ndị a na-agbatị na-eme ka oche ahụ kwụsie ike, ma ọ bụ na kapeeti ma ọ bụ osisi siri ike.
• Atụmatụ maka ndị na-egwu egwuregwu: tebụl ọkpụkpọ a nwere njikwa dịpụrụ adịpụ, onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, nko ekweisi, oghere nduzi eriri USB 2 na ihe nkwụnye oghere na-ahazi ihe nke ọma.Ọ bụghị naanị tebụl egwuregwu, kamakwa ọ na-arụ ọrụ multifunctional.
• Mgbakọ dị mfe: Iji mee ka mgbakọ nke tebụl egwuregwu a siri ike dị mfe dị ka o kwere mee, anyị etinyela ntụziaka doro anya na nkọwa zuru ezu (Asụsụ Bekee anaghị ekwe nkwa), akụkụ ọnụọgụ na ngwaọrụ niile dị mkpa.
Igwe ọkụ anya nke RGB na-achịkwa
EMEbere maka ndị egwuregwu: The TwoBlow okpokoro okpokoro nwere ọkụ fiberglass RGB LED ma mepụta gburugburu egwuregwu dị egwu.Ultra-high-edu material: Optical core material, kpuchie na elu-ike transperent ire-retardant plastic teknụzụ, nke nwere ike hụ na ogologo oge enweghị àgwà nsogbu dị ka mmebi na nrụrụ.Nhọrọ maka ọtụtụ ụdị ọkụ ọkụ: Site na njikwa ime igodo 17: otu agba 6, mgbanwe agba 6, mgbanwe ọkụ RGB na ọkụ ọkụ.Ogo na-aga n'ihu: Site na elu carbon fiber na ọkụ RGB LED iji gosipụta njirimara nke onye ọkpụkpọ gị, TwoBlow bụ klaasị mbụ ma n'ime ma n'èzí.Ị nwere ike ịgbanwe n'ụzọ dị mfe n'ọtụtụ mmetụta ọkụ site na iji njikwa maka ahụmịhe egwuregwu ka mma.
Ihe njide ekweisi
Nhazi nke echiche, jiri oghere ahụ mee ihe nke ọma ma dị njikere igwu egwu n'oge ọ bụla.
Onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ
Ihe njide ihe ọṅụṅụ siri ike na-enye ohere maka ihe ọṅụṅụ.Lekwasị anya na egwuregwu ahụ ma echegbula onwe gị maka ntapu mmiri.
Usoro njikwa eriri jikọtara ọnụ
Site n'inye oghere maka oghere gị na etiti njikwa, tebụl kọmputa egwuregwu ESGAMING na-ewepụ ihe ize ndụ nke oghere ndị ekpughere n'ala.
Ụkwụ na-agbanwe agbanwe
Desktọpụ egwuregwu ESGAMING nwere ụkwụ nrịgo dị elu nke nwere ike ime ka oche kwụsie ike ma gbochie ịma jijiji.
Oghere ntuziaka USB
Na oghere nduzi eriri USB 2 n'aka ekpe na aka nri, dị mma maka ntinye eriri.
Carbon eriri elu
Imewe eriri carbon sitere n'ike ụgbọ ala oche ndị na-agba ọsọ.Anyị chere na ọ nwere ike igosi njirimara onye ọkpụkpọ gị.
17 igodo remote njikwa
Desktọpụ egwuregwu na-abịa na ọkụ ọkụ RGB LED na njikwa anya.Ị nwere ike ịgbanwe n'ụzọ dị mfe na ọtụtụ mmetụta ọkụ site na iji njikwa maka ahụmịhe egwuregwu ka mma.
Ụkwụ siri ike ma kwụsie ike nwere ike iburu ikike ibu 100kg
Nke gara aga: Tebụlụ egwuregwu nwere ụkwụ ụdị Z Ụdị FM-Z
Osote: Tebụl Gamer 140cm nwere ụkwụ T shpe na pad òké Model LY 140cm
R udi aluminum ụkwụ egwuregwu oche ihe nlereanya FM-JX-R